विवाहको बाजाले ६३ चल्ला हृदयघातका कारण मरेपछि किसानले दिए प्रहरीमा उजुरी - ramechhapkhabar.com
विवाहको बाजाले ६३ चल्ला हृदयघातका कारण मरेपछि किसानले दिए प्रहरीमा उजुरी
भारतमा विवाहको परम्परागत बाजाका कारण अ‍ाफ्ना ६३ ओटा कुखुराका चल्ला मारिएको एक व्यक्तिले गुनासो गरेका छन्। सन्दर्भ यसै साताको ‌अ‍ाइतबारको पूर्वी उडिसा राज्यमा भएको घटना हो। विवाहमा चर्को अ‍ावाज बजाउँदा कानको जाली फुटेर मध्यरातमा अ‍ाफ्ना चल्लाहरु मरेको किसान रन्जित कुमार परिदाले अ‍ारोप लगाएका छन्।
‘बाजा बजाउने मानिसहरुलाई बाजको अ‍ावाज सानो बनाउन अग्रह गरे, तर उनीहरुले सुनेनन्। विवाहमा निकै चर्को अ‍ावाजमा बाज बजाइएको थियो।’ उनले भने। अ‍ाफूले सम्झाउँदा बेहुलीका साथीहरुले झनै थर्काएको उनले गुनासो गरे।
क्षतिपूर्तीको माग गर्दै उनले विवाह अ‌ायोजकविरुद्ध उजुरी गरेका छन्। एक पशु चिकित्सकले ह्दयघात भएर चल्ला मरेको बताएका छन्। जीव विज्ञानका प्राध्यापक सूर्यकान्त मिश्रले चर्को अ‍ावाजले चराचुरुङ्गीमा ह्दयघात हुने बताएका छन्। ‘चर्को संगीत वा अकस्मातको उत्तेजना र चोटले चराचुरुङ्गीको जैविक चक्रमा असर गर्छ’ उनले भने। यसैबीच प्रहरीले दुबै पक्ष मिलेर समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित पक्षलाई अनुरोध गरेको छ।
हरेक २५ मिनेटमा एक भारतीय गृहिणीले गर्छन् आत्महत्या
अहिले प्रायः सबै देशमा आत्महत्याले विकराल रुप लिएको छ । त्यसमा पनि महिला आत्महत्या बढ्दो छ । बलत्कार, घरेलु हिंसा, दमन र उत्पिडनका कारण महिलाहरुको आत्महत्या दर बढ्दो छ । भारतमा यो दर झनै बढ्दो छ ।
भारतमा गत वर्ष मात्र २२ हजार ३ सय ७२ गृहणीले आत्महत्या गरेको सरकारको राष्ट्रिय अपराध रेकर्ड व्युरो (एनसीआरबी) ले जनाएको छ । यसको अर्थ औषतमा हरेक दिन ६१ जना र प्रत्येक २५ मिनेटमा एक जनाले आत्महत्या गर्छन् । सन् २०२० मा रेकर्ड भएका १ लाख ५३ हजार ५२ आत्महत्यामध्ये १४ दशमलब ६ प्रतिशत गृहणी छन् । गत वर्ष मात्र अपवाद थिएन् ।
सन् १९९७ मा एनसीआरबीले तथ्यांक संकलन गरेदेखि नै हरेक वर्ष २० हजारभन्दा बढी महिलाले आत्महत्या गरेका छन् । सन् २००९ मा सो संख्या २५ हजार ९२ पुगेको थियो । पारिवारिक समस्या वा विवाहसँग सम्बन्धित झगडाले उनीहरुले आत्महत्या गरेको विभिन्न प्रतिवेदनले दर्शाउँदै आएका छन् । तर, के कारणले ती हजारौं महिलाले जीवन त्याग्छन् ?
मानसिक स्वास्थ्य विज्ञहरुका अनुसार आत्महत्याको मुख्य कारण घरेलु हिंसा हो । हालै गरिएको एक सर्वेक्षणमा ३० प्रतिशत महिलाले श्रीमानबाट हिंसा सामना गर्नु परेको बताएका छन् ।
महिलाका दैनिक घरमा गर्ने कडा श्रमले वैवाहिक जीवनलाई उकुसमुकुस बनाएको र त्यसले हिंसा जन्माएको सर्वेक्षणमा जनाइएको छ । ‘महिलाहरु वास्तवमै सहनशील हुन्छन्, तर सहनुको पनि सीमा हुन्छ,’ उत्तरी सहर बनारसकी मनोविद् डा. उषा वर्मा श्रीवास्तव बताउँछिन् ।
उनी अगाडि भन्छिन्, ‘१८ वर्ष पुग्ने वित्तिकै अधिकांश युवतीले विवाह गर्छन् । उनीहरु कसैको श्रीमती र वुहारी बन्छन् र आफ्नो सम्पूर्ण दिन खाना पकाउँदै र घरको सफा गर्दा बित्दछ । उनमा हरेक प्रकारका प्रतिबन्ध लगाइन्छ । उनको थोरै स्वतन्त्रता हुन्छ । उनलाई पैसामा सायदै पहुँच हुन्छ । ’
श्रीवास्तव भन्छिन्, ‘विवाहपछि महिलाकाे शिक्षा र सपनाको कुनै अर्थ रहन्न । उनका महत्वकांक्षा विस्तारै ओइलाउन थाल्छन् । निराशा र पीडाले उनको अनुहार ढाक्छ ।’